Homeसमाचारबढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार भइरहेको छ? हेर्नुहोस्
February 7, 2021 admin समाचार 6909
नेपाली बजारमा आज सु’नको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापवा’ल सुन ६०० रूपैयाँले बढेर ९० हजार ६०० रूपैयाँ कामय गरिएको छ । तेजाबी सुनको मूल्य पनि आज ६०० रू’पैयाँले बढेर तोलाको ९० हजार १५० का’यम भएको छ ।
चाँदी’को मूल्य पनि आज बढेको छ । शुक्रबार १२९० रूपैयाँमा कारोबार भए’कोमा आज २० रूपैयाँले बढेको छ । आज तोलामा १३१० रुपैयाँ कायम गरिएको महा’संघले जनाएको छ । – खबरहबबाट
हामी जीव’नमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरूलाई भेट्छौं। कसैको स्वभाव हामीलाई निकै मन पर्छ भने केहि मानिसको बनी फिटिक्कै मन पर्दैन। केहि मानि’ससँग पहिलो भेटमा नै निजी’क हुन्छौं। भने कोहिसँग सहज हुन समय लाग्छ। आजको समयमा सिधा साधा मानिस भेटिन निकै गार्हो हुन्छ। तर केहि मानिस निकै सोजा र सरल पनि हुन्छन्। त्यस्तै, केहि मानिस अत्यन्त चलाख किसि’मका हुन्छन्, जो निकै चतुर तथा समझदारीका साथ काम गर्ने गर्छन्।
सुखी जीवन’को लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू चिन्न सक्नुपर्छ र त्यहि अनुसार व्यवहार गर्न सिक्नु पर्छ। विशेषगरी जब हामी कसैसँग प्रेम सम्बन्धमा हुन्छौं, किनकि प्रेम सम्बन्धमा खुसी र सुखी हुनु धेरै महत्त्व’पूर्ण हुन्छ। ज्योतिषका अनुसार निम्न उल्लेखित चार राशिका मानिस प्रेम सम्बन्धमा हरेक निर्णय चतुरतापूर्वक गर्छन्। यी मानि’स हरेक तरिका अपनाउछन् ताकी आफ्नो प्रेमी आफ्नो इसारामा नाचोस्।
मिथुन राशिका मानि’सहरु दोहोरो चरित्रका हुन्छन्। मिथुन राशिका व्यक्तिहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् र उनीहरूको वाणीको कुरामा निकै सतर्क हुन्छन्। यिनीहरुले यो कुरा राम्रोसँग जानेका हुन्छन् कि कस्तो बोली तथा वा’णीले अरु मान्छेलाई आफ्नो इसारामा नचाउन सकिन्छ र आफ्नो अनुसार कार्य निकाल्न सकिन्छ।
यस राशिका मानिस निकै च’लाख हुन्छन्। यी मानिसलाई कुनै पनि समय आफ्नो प्रेमी आफ्नो अनुसार कार्य गरिरहेको छैन भन्ने लग्यो भने हेरफेर गर्न प्रयास गर्छन्। असुर’क्षाको स्थितिमा अरुको कमजोरीको माध्यमले अरुलाई आफ्नो औंला’मा नाच्न बाध्य पार्छन्।
वृश्चिक राशिका मानिस कहिल्यै पनि आफ्नो भावना अन्य मानिस समक्ष व्यक्त गर्न सक्षम हुँदैनन्। जसको कारण उनी’हरूको प्रेम सम्बन्धमा निश्चित रूपमा दुविधा रहन्छ। वृश्चिक राशिका मानिसको मौनतामा पनि चलाखी लुकेको हुन्छ। अरु मानिस कहिले पनि ओ सम्झिन सक्दैन कि उनीह’रुको दिमागमा के कुरा चलिरहेको छ।
मीन राशिका मानिस निकै चतुर हुन्छन्। यिनीहरु धेरै चला’खीसाथ आफ्ना प्रेमीलाई आफ्नो अनुसार चल्नको लागि तयार गर्छन्। विश्वास गर्नुहोस् यो सबैको बस’को कुरा हैन। प्रेम सम्बन्धमा यी मानिस आफैं मनमानी गर्छन्, प्रेमीको आवश्यकता के हो ? यसले यी मानि’सलाई फरक पार्दैन।
काठमाडौँमा भेटिए हावामा उड्ने युवा, यस्तो अच’म्मको प्रतिभाले दुनियाँ च’कित पार्दै (हेर्नु’होस भिडियो)
प्रचण्डकी नातिनी स्मीताले हजुरवुवा प्रचण्डका लागि गाइन् ‘हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बोलको गीत(हेर्नु’होस् भिडियो)
September 25, 2021 admin समाचार 3987
चर्चित टिकटक स्टार स्मारिका ढकालको डिर्भोस भएको छ । धेरै दिनदेखि उनको डिभोर्सको चर्चा टिकटकमा व्यापक भएपनि उनका पूर्वपतिले आफुहरुले खुशी साथ अलग भएको जानकारी दिएका छन् । स्मारिकाका श्रीमान विवेक अधिकारीले टिकटकमै लाइभ आएर
March 14, 2021 admin समाचार 6379
भारतवाट फ’र्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमललाई कोरोना पुष्टि
April 20, 2021 admin समाचार 5082
भारतको महाकुम्भ मेला’मा सहभागी भएर फ’र्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पत्नी कोमल शाहलाई कोरोना भा’इरस पुष्टि भएको छ। महाकुम्भ मेला कोरोनाको हट स्पट बनेको थियो । दुई महिना सम्म चल्ने कुम्भमे’लामा महास्नान गर्न पुगेका पूर्वराजा